RAHARAHAM-PIRENENA : " hajaina ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika" hoy ny FFM
Mafampana ny raharaham-pirenena ankehitriny, hoy ny teo anivon’ny filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny FFM. 25 mars 2021
Manaraka akaiky ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny ny FFM ary mandray anjara feno amin’ny famahana ny olana ara-pôlitika mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny Firenena.
Raha ny fintin’ny fanambaràna nataon’ny filoha lefitry ny FFM avy any Toamasina sady filoha mpisolo toerana dia tsy tokony hisy intsony izany fieritreretana hanongam-panjakana izany satria tsy zakan’ny vahoaka malagasy intsony ny krizy lalina mety haterak’izany. Noho izany tokony samy hiandry fifidianana ny antoko politika tsirairay. “Samy mahatsapa isika fa miakatra ny maripana ara-politika eto amin’ny Firenena noho ny fifandroritana eo amin’ny Mpanohitra sy ny Mpitondra. Koa dia natao vaindohan-draharaha ny fanatonana nifampidinihana tamin’ireo ankolafy samihafa mba hampisy ny fitoviana sy hisorohana ny amin’ny mety hisian’ny fifandonana izay mety hiteraka fandatsahan-dra eto amin’ny Firenena.
Tsy zakan’ny vahoaka malagasy intsony ny fisian’ny korontana sy ny krizy, ka tokony hohajaina ny fifandimbiasan-toerana ara-demokratika, fifampidinihana ankitsim-po ao anatin’ny fanajana ny sotoavina malagasy sy ny tany tan-dalàna no tokony hatao laharam-pahamehana”, hoy izy. Io fifandimpiasam-pahefana ara-demokratika izay efa niainana teto amin’ny Firenena io no mila tohizana mba tsy hiteraka krizy politika vaovao indray izay tsy ho zakan’ny Firenena intsony, hoy hatrany ny nambarany.
Nandritra ny lanonana namaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany nataon’ireo mpikambana eo anivon’ny Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Ampefiloha, omaly no nanaovana io fanambaràna io. Tao anatin’io iray volana io dia betsaka ny asa vita, anisan’izany ny fandinihana an’ireo antontan-taratasy izay mangataka ny hahazo fanonerana arak’asa.
“Mikasika manokana ny fangatahana fanonerana noho ireo fahavoazana arak’asa dia soritana fa misy 17 ny fanapahan-kevitra noraisina ka ny 12 nekena ary ny dimy kosa nolavina.
Manaraka izay dia nomena laharam-pahamehana ny fanamafisana ny sehatra hifampiresahana sy ny kianja maitso. Ireo no heverintsika fa anisany lalana hahatongavana amin’ny fampandraisana an-tanana ny tsirairay amin’ny raharaham-pirenena hirosoana amin’ny fitsinjaram-pahefana tena izy”, araka ny voalaza hatrany.